Shirweyne looga hadlayo cirib tirka guurka gabdhaha da'da yar oo ka furmay Senegal - BBC News Somali
Shirweyne looga hadlayo cirib tirka guurka gabdhaha da'da yar oo ka furmay Senegal
Image caption Guurka gabdhaha da'dayar
Dowladda Senegal ayaa martigelinaysa shirweyne saddex maalmood socon doona oo maanta oo Isniin ah ka furmaya dalkaasi.
Shirweynahan ayaa looga gol-leeyahay sidii loo dardargelin lahaa qaabkii lagu soo afjari lahaa guurka carruurta ee Galbeedka iyo Bartamaha Afrika.
Hay'adaha samafalka ayaa sheegaya in horumar muuqdo la gaaray sanadihii la soo dhaafay hasayeeshee gobolka waxaa ku yaal lix ka mid ah 10-ka dal ee ugu sarreeya guurka gabdhaha da'da yar caalamka oo dhan.
Guurka carruurta ayaa Galbeedka iyo Bartamaha Afrika ka ah dhaqan iska caadi ah, iyadoo tiraduna ay aad u sarreyso, oo dalka Niger gabdhaha ka yar 18-ka ayaaba xoog lagu guursadaa, waxa ayna tiradoodu gaaraysaa boqolkiiba 76, halka Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika iyo Chad ay tiradaasi gaarayso boqolkiiba 68, Mali iyo Guinea-na tiradu waxa ay ka sarreysaa boqolkiiba 50.
Gabdhaha da'da yar lagu guursado ayaa isaga hara iskuullada, iyadoo habka ugu wanaagsan ee guurkan looga hortegi karana lagu sheegay inuu yahay in gabdhaha ay waxbarasho helaan.
Qoysaska saboolka ah ayaa gabdhahooda da'da yar ragga u guuriya si ay dhaqaale uga helaan guurkooda, halka diimaha qaarna ay qiimo gaar ah siiyaan guurka xilliga hore ee uu qofku da'da yar yahay.
Shirweynahan ayaa waxaa isugu imaanaya wasiirro ka socda dowladaha, hogaamiyayaasha diimaha iyo kuwa dhaqanka iyo sidoo kale hay'adaha Qaramada Midoobay iyo kuwa samafalka, dhammaan dhinacyada ayaa ku rajo weyn inay gaaraan tallaabooyin wax ku ool ah oo loo qaado sidii gobolka looga cirib tiri lahaa dhaqankaasi.